I-Aloe Brevifolia: Ukukhulisa Ingwenya Eyi-Chunky - Amacacti Namasucculents
I-Aloe Brevifolia: Ukukhulisa Ingwenya Eyi-Chunky
Konke Mayelana Nenhlaba Emifushane
Izinhlobo ze-Aloe Brevifolia
Ukunakekelwa Kwezitshalo Zengwenya
Uthanda izitshalo ze-aloe? Kukhawulelwe esikhaleni? Well, uze endaweni efanele. Kulesi sihloko, sizoxoxa ngakho konke odinga ukukwazi nge-Aloe brevifolia, inhlaba encane.
Incane futhi imnandi, i-Aloe brevifolia ingaphansi kukanyawo ubude. Inamaqabunga aminyene, angunxantathu esitshalo se-aloe, kodwa ikhula nge-rosette enjengamanzi. Ngombala, luhlaza okotshani, luhlaza okwesibhakabhaka nampunga. Inhlaba enamaqabunga amfishane ilungele izikhala ezincane kepha ezibukisayo ezitsheni noma ezingadini.
Ingabe ukulungele ukuzama le Aloe eyingqayizivele? Nakhu konke okudingayo ukuze uphumelele.
Imikhiqizo Emihle Yengwenya Ethe Chunky:
UDkt Earth Exotic Cactus Nomhlabathi Omuncu
Ukulawulwa Kwezifo Zesikhunta seBonide Fung-Onil
I-Aloe brevifolia iyisitshalo se-aloe esijabulisayo nesilula ukukhula.
Amagama ajwayelekile Inhlaba enamahlamvu amfishane, isitshalo sengwenya
Igama Lesayensi Aloe brevifolia
Ukuphakama nokusabalala 12 ″ ubude nobubanzi
Khanyisa Kugcwele ilanga elincane
Amanzi Indlela 'yokucwilisa neyomile'
Umhlabathi Iyisihlabathi futhi idonsa ngokushesha
Umanyolo Ongakukhetha; Umanyolo olinganiselayo wamanzi
Izinambuzane Nezifo Isikali sezinambuzane nama-mealybugs, ukubola kwezimpande
I-Aloe brevifolia inegama elijwayelekile lesitshalo sengwenya, ngenxa “yamazinyo” aso. Lawa ma-spikes athambile agudla emaphethelweni futhi adale umgogodla phansi ngemuva kweqabunga ngalinye. Azinangozi, kodwa qaphela! Lesi sitshalo uqobo sinobuthi obunobuthi, futhi akufanele sidliwe abantu noma izilwane ezifuywayo.
Inhlaba enamahlamvu amfishane ikhula kangcono ngaphandle ezindaweni ezingama-9-11. Ilungele izingadi zamadwala kanye ne-xeriscaping. Ngoba ikhula ngamaqoqo ama-rosettes, futhi yincane kakhulu ikhava yaphansi . Uma ukhulisa inhlaba yakho enamaqabunga amafushane endaweni efanele, ungavuzwa ngombala othile. Amathiphu amaqabunga aphenduka umbala obomvu, ophuzi no-orenji ophendulayo ekukhanyeni okukhanyayo.
Umdabu waseNingizimu Afrika, leli aloe likhula ngamandla entwasahlobo nasekwindla. Ukukhula kwayo kubambezela noma kuyeke ehlobo nasebusika. Iphinde ihehe izinyoni, izinyosi, nezimvemvane ngezimbali zayo. Laba buhle abade, ababomvu-orange bavela ngasekupheleni kwentwasahlobo.
Ngezinye izikhathi ibizwa ngokuthi ingwenya aloe ngenxa yamaqabunga ayo acwebezelayo.
Yize i-Aloe brevifolia uqobo lwayo iyizinhlobonhlobo ezivame kakhulu, lezi zinhlobonhlobo ezingaphansi ziyimiphumela ethokozisayo okufanele uyibheke.
I-Aloe brevifolia f. Okuhlukahlukene
Leli fomu linemigqa engafani, ephuzi namhlophe. Ilungele ukwengeza umbala ocashile engadini yakho yedwala.
I-Aloe brevifolia var. Ngokushesha
Lolu uhlobo olukhulu kakhulu lwe-Aloe brevifolia. Ifinyelela kufidi ubude futhi isakazeka kakhulu phakathi kwama-rosettes. Amaqabunga akhula ngaphandle phansi, akha isimo sembali.
Ukuthi isitshalo sengwenya sinakekelwa kahle akusho ukuthi asikho isidingo. I-Aloe yakho izokhula kuphela ngokunakekelwa okufanele!
I-Aloe brevifolia ifuna futhi ichume ngokukhanya kwelanga. Ikhetha amahora angu-6-8 wokukhanya okukhanyayo nsuku zonke. Kodwa-ke, izokhula elangeni eliyingxenye uma ukukhanya okuqondile kungeyona inketho. Lapho uhambisa i-aloe yakho endaweni entsha, mayibe ilungele ukukhanya ngokwethula indawo entsha kancane.
Izinga lokushisa elifanele lalesi sitshalo lingama-70-80 ° F. Uma indawo yakho ibanda ngaphezu kuka-20 ° F, i-Aloe brevifolia yakho izodinga ukungena ngaphakathi.
Uma usendlini, faka isitshalo sakho sengwenya ewindini elibheke eningizimu elibheke kakhulu eningizimu onalo. Faka ngokukhanya okukhulayo uma kudingeka.
Amaqabunga e-Aloe brevifolia agcwele amanzi kangangokuba awadingi ukuchelelwa njalo. Indlela enhle kakhulu lapha 'cwilisa futhi womile futhi womile'. Nikeza inhlaba yakho enamaqabunga amafushane isiphuzo esijulile, bese uvumela inhlabathi yomile futhi ihlale injalo izinsuku ezimbalwa.
Kini nina banisela ngokweqile, i-Aloe brevifolia iyaxolela ngokufanele. Ingaphatha umswakama othile, kepha ngeke ikhule nayo. Bhekisisa amaqabunga aphuzi kanye nama-mushy, okuwuphawu lokunisela okukhulu. Uma lokhu kwenzeka, buyisela i-Aloe brevifolia yakho emhlabathini owomile bese ubeka ikani lokunisela.
Nikeza inhlaba yakho emfushane eshiye amanzi kancane ebusika nasehlobo. Ukwanda kakhulu ngalesi sikhathi kungadala ukuthi ibole.
Lezi zinhlobo ze-aloe zingakhula ezimbizeni noma ngqo emibhedeni engadini enamanzi.
Ukuyigcina inhle futhi yomile, tshala isitshalo sakho sengwenya enhlabathini ekhipha kahle. Ngokufanelekile, ⅓ yenhlabathi kufanele ibe isihlabathi, perlite , noma amatshe amancane. Ukuxuba umhlanganiso wakho kuyindlela elula yokuqinisekisa lokhu.
Uma ukhetha ukusebenzisa inhlabathi ekhethekile enamanzi, hlola i-drainage bese ufaka i-perlite uma kudingeka. Umhlabathi kufanele ukhiphe kahle ngokwanele ukuze i-Aloe yakho ingalokothi ihlale emanzini, noma ngabe sekuniselwe kakhulu.
Umanyolo olinganiselayo wamanzi ulungele i-Aloe brevifolia, yize uthanda. Yondla isitshalo sakho amahlandla ama-2-3 ngesikhathi sentwasahlobo nasekwindla. Ungavundisi ehlobo nasebusika.
Isitshalo sengwenya sikhula kancane, ngakho-ke kungenzeka ungadingi ukusiphinda. Kodwa-ke, uma isitshalo sakho sikwazi ukudlula isitsha sayo, sekuyisikhathi sokuthuthuka.
Phatha i-aloe yakho efushane ebhodweni elikhudlwana nenhlabathi entsha, eyomile. Ngemuva kokutshala kabusha, mayihlale ngaphandle kwamanzi izinsuku ezimbalwa ukuze ikwazi ukuzivumelanisa nokunyakaza.
I-Aloe brevifolia isebenza kahle ekusakazeni ngokwayo. Ihlala ithumela ama-offsets, abizwa nangokuthi amaswidi. Lokhu kusakazwa yikho okwenza kube yisembozo esihle somhlabathi.
Ngemuva kokuthi i-Aloe brevifolia yakho isikhule ama-rosette amaningi, ungasabalalisa kalula ngokuhlukanisa. Mane nje uthole ingxenye yesitshalo bese usisika mahhala kumzali. Ngemuva kokutshala kabusha, unganiseli izinsuku ezimbalwa ukuze amanxeba aphole. Ukwehlukanisa i-Aloe brevifolia yakho njalo eminyakeni embalwa kuzosiza ukuyinika amandla futhi kukhuthaze ukukhula okwengeziwe.
Ungasabalalisa futhi isitshalo sakho sengwenya kusuka ezindaweni zayo. Hlukanisa i-offset bese uyisika esitshalweni. Isilonda masome izinsuku ezimbalwa bese usitshala. Gcina inhlabathi ihlale imanzi kuze kube yilapho ukusika sekukhulile izimpande futhi kutholakala.
I-Aloe brevifolia, ngokungafani nezinye iziphuzo ezinomsoco, ayisabalali kahle emaqabungeni njengoba ejwayele ukuhamba njenge-mushy.
Ukuthenwa kuphela okudingekayo okwezimbali ezifile. Zisuse phansi kwesiqu ngemuva kokuqhuma kwezimbali.
I-Aloe brevifolia kwesinye isikhathi ibizwa ngokuthi i-aloe-leaved aloe.
Inhlaba enamaqabunga amfishane imvamisa ayinazifo futhi ayinazinambuzane. Kodwa-ke, kufanele uhlale ubheke izimpawu. Ukuzibamba kusenesikhathi kuzokwenza okwakho nempilo yesitshalo sakho kube lula.
Izinkinga ezinkulu ozozibona ku-aloe wakho - uma zikhona - imvamisa zibangelwa ukugcwala ngokweqile noma ngaphansi kwamanzi.
Izitshalo zengwenya ezinamanzi amaningi zizophenduka ophuzi noshowe . Uma ishiywe emanzini isikhathi eside kakhulu, ingaqala ukubola. Shintshela enhlabathini eyisihlabathi bese uyishiya yomile ngokuphelele phakathi kokunisela.
Uma i-Aloe brevifolia yakho amaqabunga abuna noma ashwabene , badinga amanzi amaningi. Nikeza isitshalo sakho isiphuzo esihle futhi kufanele silulame.
Isikali Sezinambuzane izinambuzane ezimbi ezimunca impilo kumalolo. Mancane futhi ngokuvamile amhlophe noma ansundu. Esinye sezinambuzane zesikali esivame kakhulu ozohlangana naso yi- mealybug . Lona ushiya ngemuva izidleke ezimhlophe, zekotoni ezifana nesikhunta esimpuphu.
Izinambuzane ezilinganayo, kufaka phakathi i-mealybugs, zingavinjelwa ngokugcina i-Aloe brevifolia yakho yomile futhi ingavundisi ngokweqile. Uma uqaphela izinambuzane ezimbalwa nje, zibulale ngokushesha ngokuzisusa ngokomzimba noma ngokuziphuza ngotshwala.
Ngokutheleleka okukhulu, sincoma uwoyela wokulima noma thatha uwoyela . Ukumboza isitshalo sakho sengwenya ngongqimba omncane walokhu kuzonciphisa izinambuzane. Ukufafaza isitshalo sakho ngensipho yokubulala izinambuzane kungenye indlela enhle.
Akukho okuningi okuma endleleni ye-Aloe brevifolia uma kukhulunywa ngezifo. Kodwa-ke, ngokuyisisekelo zonke izitshalo zasogwadule zingakhula ukubola kwezimpande . Lokhu kwenzeka lapho isitshalo sihlala simanzi, esimema amagciwane. Izingxenye ezibolile ze-aloe yakho enamaqabunga amafushane zizoba nsundu noma zimnyama futhi zibe mushy.
Vimbela ukubola kwezimpande ngokunisela kahle bese ukhetha inhlabathi ekhipha kahle. Uma ubona ukubola esitshalweni sakho, kuzodingeka uthathe isinyathelo ngokushesha ngaphambi kokuba sisakazeke.
Ngama-clippers oyinyumba, sika zonke izingxenye ezibolile ze-Aloe brevifolia yakho. Uma lokhu kusho ukuthi uzonciphisa ubuningi besitshalo, kungcono ukuthi usakaze kusuka ezingxenyeni ezinempilo ezisele bese ulahlekelwa yisitshalo uqobo.
Ngemuva kokukhipha izingxenye ezibolile, phinda inhlaba yakho emfushane eshiye umhlabathi omusha, odonsa kahle. Ukusiza ukuvimbela ukusabalala kwanoma yikuphi ukubola okuphuthelwe, faka isibulali-fungu emhlabathini. Vumela i-Aloe brevifolia yakho ihlale enhlabathini eyomile izinsuku ezimbalwa ngaphambi kokuchelela.
Q: Ingabe i-Aloe brevifolia iyadliwa njenge-Aloe Vera?
malini ama-goddess braids
IMP: Cha. I-Aloe brevifolia ingaba nobuthi obuncane kubantu, idale ukungakhululeki okukhulu esiswini kanye nesicanucanu esingaba khona. Ezilwaneni, inhlaba enkulu ibanga ukugabha, ukucobeka, nohudo, futhi kufanele uhambise isilwane sakho kudokotela wezilwane ngokushesha ukuze uvikele noma yiziphi izinkinga eziyingozi kakhulu.
Q: Ingabe i-Aloe brevifolia ingakhula endlini?
IMPENDULO: Kungahle, kepha izimo zangaphandle ziyavuma ezindaweni ezifudumele kakhulu. Uma kufanele ukhulele endlini, faka i-Aloe brevifolia yakho ewindini elibheke eningizimu, elibheke eningizimu bese usebenzisa isibani esikhulayo uma kudingeka.
yini ukugunda izinwele okubuthuntu
ikhula ibe mpunga nge-balayage
i-mascara ehamba phambili yezidakamizwa ngamehlo abucayi
polyamory lokho abangane bami abacabanga ukuthi ngiyakwenza